Zvinhu Zvinogadzikana - Suzhou MENTIONBORN Viwanda Uye Trade Co, Ltd.
Deredza kabhoni dhayokisaidhi kubuda
Kugamuchirwa kwe "ECO CIRCLE" kutorwa kunogona kuderedza zvakanyanya mutoro wezvakatipoteredza.
Kudzora kushandiswa kwezviwanikwa-zvakaneta zviwanikwa.
Inogona kudzora kushandiswa kwepeturu peturu zvinhu izvo zvinoteedzera polyester mbishi zvinhu.
Kuderedza kuburitswa kwemagreenhouse gasi (CO₂)
Izvo zvinoshandiswa polyester zvigadzirwa hazvisisiri marara asi zvinogona kunyatsoshandiswa zvakare se zviwanikwa. Inogona kupa mupiro kudzora iyo
Hapana munhu anoda hembe dzekare kuti ape, uye zvinosuwisa kurasa. Kana iwe uchida kupa, iwe hauzive kwekuvapa. Saka hembe dzakawandisa dzavanhu dzakaunganidzwa dzichiwanda, uye dzinofanirwa kurapwa marara mushure menguva refu. Kwete chete iyo inokonzeresa kutambisa zviwanikwa, zvakare inosvibisa nharaunda. Zvinoenderana nehuwandu, matani ehembe dzemarara anopinda munzvimbo yekuviga mazuva ese, uye tambo dzakagadzirwa nevanhu dzicharamba dziri pasi kwemazana emakore, zvichisvibisa ivhu nemvura zviwanikwa.
Kudzorerazve mbatya dzekare, kusimudzira mashandisirwo ezvekushandisa, uye kudzikisira kusvibiswa kwezvakatipoteredza ibasa-kuwanda rako'shi ...
Uchishandisa marara zvipfeko, zvimedu uye zvimwe marara polyester zvinhu sekutanga mbishi zvigadzirwa, iyo inoderedzwa kuita polyester kuburikidza zvakakwana chemakemikari kuora, uye kugadziriswazve kuita nyowani yepamusoro, yakawanda-inoshanda, inoteedzana, uye yekusingaperi inodzokorodza polyester fiber. Chigadzirwa chinoshandiswa zvakanyanya Muminda yemitambo yekumusoro-soro, kupfeka kwehunyanzvi, yunifomu yechikoro, yemafashoni evarume neyevakadzi, machira epamba nemabhedha, zvemukati zvemotokari, nezvimwewo, mupfungwa chaiyo, inoziva denderedzwa rakavharwa uye rinogara kubva kuzvipfeko. kupfeka. Sezvo ichigadzirisa kuti machira emarara anogona kudzokororwazve, zvichinyatso kudzikisira kushandiswa kwepetroleum zviwanikwa uye kudzikisa marara.
Bhachi reMitambo, Kukurumidza-Kuomesa Sports Shorts, Mharidzo Kugadziriswa Uye Kugadzira, Varume Vakasarudzika Sports Bhurugwa, Yakapetwa-Yakatenderedzwa Flannel Blanket, Varume Vanokurumidza-Kuomesa Vakarukwa Mapfupi,